China International Hardware Show (CIHS) yakavambwa muna 2001.Mumakore gumi apfuura, China International Hardware Show (CIHS) inoenderana nemusika, indasitiri yebasa uye inokura nekukurumidza. Izvozvi zvave kujekeswa zvakajeka senyika yechipiri pakukura Hardware showa mushure meInternational HARDWARE FAIR COLOGNE kuGerman. CIHS ndiyo inosarudzika yekutengesa chikuva nevemaindasitiri vagadziri uye vane masimba masimba emabhizimusi kutenderera pasirese, senge International Federation yeHardware neImbawaresi Masangano (IHA), iyo Association yeGerman Turu Vagadziri (FWI), pamwe neTaiwan Hand Tools Vagadziri` Sangano (THMA).
China International Hardware Show (CIHS) ndiyo yepamusoro yekutengesa yeAsia kune ese Hardware uye DIY zvikamu zvinopa nyanzvi vatengesi nevatengi vane yakazara chikamu chezvigadzirwa uye masevhisi. Izvozvi zvave kujekeswa zvakajeka seyakanyanya kusimba Hardware kutsvaga fairin Asia mushure meYEMAHARA HARDWARE FAIR muchikorene.
Zuva: 8/7/2020 - 8/9/2020
Nzvimbo: Shanghai New International Expo Center, Shanghai, China
Varongi: China National Hardware Association
Chiedza Chigadzirwa Sub-Kanzuru, China Kanzuru yekusimudzira kweInternational Trade
Tarisa pakushanda kuAsia Hardware mabhizinesi ekunze
Yakakura dhatabhesi yepamusoro yevatengi vekunze kwenyika vanotora chikamu mune bhizinesi matchmaking chirongwa
Batsirwa nehunyanzvi hweChina yenyika Hardware Association CNHA uye shandisa ruzivo rwayo kupinda mumusika weChina
Yakawedzera nzvimbo yekuratidzira yekuwedzera kwechigadzirwa
Tora chikamu muzviitiko zvepaiti, kubhizimusi uye ruzivo rwekutungamira mudanho rimwe
Rutsigiro rwakasimba kubva ku "INTERNATIONAL HARDWARE FAIR Cologne"
Varatidzi nechikamu chechigadzirwa: Zvishandiso, Zvishandiso zvemaoko, Zvishandiso zveMagetsi, zvishandiso zvePneumatic, Zvishandiso zveMechanical, Kukuya mabrasives, Zvishandiso zveWelding, Zvishandiso zvemidziyo, Kiya, kuchengetedzwa kwebasa uye zvishongedzo, Kiyi & makiyi, Zvokuchengetedza & sisitimu, Basa rekuchengetedza & chengetedzo, Lock zvishongedzo, Kugadzira Zvishandiso, Midziyo yekugadzirisa simbi, Midziyo yekuyedza, Surface yekurapa michina, Pump & vharafu, DIY & chivakwa Hardware, Kuvaka zvinhu & zvinoriumba, Furniture Hardware, Yekushongedza simbi, Fasteners, Zvipikiri, waya & Mesh, Kugadziridza Midziyo, Simbi yekugadzirisa michina, Yekuyedza michina, Pamusoro mishonga yekurapa, Pump & vharafu, Bindu.
Vashanyi Chikamu: Kutengeserana (Retail / Wholesale) 34.01%
Mutengesi / mupepeti 15.65%
Hardware chitoro / Kumba kwepakati / Dhipatimendi Chitoro 14.29%
Gadzira / Prod 11.56%
Mumiriri / Muparidzi 7.82%
Chigadzirwa chekupedzisira mushandisi 5.78%
DIY Anofarira 3.06%
Kuvaka & kushongedza Kambani / Muumbi / Injiniya 2.72%
Sangano / Partner 1.02%
Muvaki / Muongorori / Zvivakwa 1.02%
Midhiya / Dhinda 0.68%